Health Archives - Page4of5- Internet Sansar
यी हुन् पलेँटी कसेर खाना खाँदा हुने फाइदा
October 10, 2019	Health Comments Off on यी हुन् पलेँटी कसेर खाना खाँदा हुने फाइदा
नेपाली समाजमा अहिले पलेँटी कसेर खाने प्रचलन घट्दै गएको छ । डाइनिङ टेबलमा बसेर खाना खानु सानको विषय बन्न थालेको छ । सहरी क्षेत्रमा यसको प्रभाव धेरै छ । तर, स्वास्थ्यविज्ञहरूका अनुसार टेबलमा बसेर खानुभन्दा पलेँटी कसेर खानु धेरै नै फाइदाजनक छ ।उनीहरूका अनुसार जमिनमा पलेँटी कसेर खाना खानुका फाइदा …
किन गन्हाउँछ सास ? यस्तो छ रहस्य
October 9, 2019	Health Comments Off on किन गन्हाउँछ सास ? यस्तो छ रहस्य
झट्ट हेर्दा सामान्य देखिएपनि मुखको दुर्गन्धले धेरै मानिसलाई सताईरहेको हुन्छ । यहीकारण साथीभाईबीच मात्र नभई पति पत्नीबीच पनि दूरी उत्पन्न हुन सक्छन्, मानिसलाई लाजमर्नु बनाउछ मुखको दुर्गन्धले ।मानिस जतिसुकै सुटेडबुटेड देखिएपनि मुख गन्हाउने भन्ने बित्तिकै उसको व्यक्तित्व निकै तल्लोस्तरमा पुग्न सक्छ । खासै गम्भीर नभएपनि मुख गन्हाउने समस्यामा खानपानका अलावा …
October 9, 2019	Health Comments Off on मोटोपना घटाउन के-के गर्नुपर्छ ?
१) भोकै बसेर चाँडो तौल घटाउने प्रयास गर्नु हुँदैन । यसबाट विभिन्न विकृतिहरू उत्पन्न हुन सक्छन् । हप्ताको १ / २ देखि १ किलो ग्रामभन्दा बढी तौल घटाउनु उपयुक्त हुँदैन ।२) उसिनेको खाना मात्र खानुपर्छ भन्ने गलत धारणा राख्नु हुँदैन । स्वादका लागि केही मरमसलाहरू प्रयोग गरी खाद्यपदार्थलाई स्वादिष्ट बनाउन …
कार्तिक २ र ३ गते देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधी खुवाइने… सक्दो सेयर गरिदिनु होला
October 9, 2019	Health Comments Off on कार्तिक २ र ३ गते देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधी खुवाइने… सक्दो सेयर गरिदिनु होला
काठमाडौँ, २२ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्तिक २ र ३ गते देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ खुवाउने भएको छ ।आर्थिक वर्ष ०७६/७७ अन्तर्गत पहिलो चरण ७५३ वटै स्थानिय तहका ६ महिनादेखि ५ वर्ष सम्मका बालबालिकाहरुमा भिटामिन ‘ए’ र १ देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई जुकाको औषधी खुवाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको …
अण्डा उसिनेको पानी खेर नफाल्नुहोस्, यस्ता छन् अचम्मका फाइदा पत्याउनै गाह्रो
October 8, 2019	Health Comments Off on अण्डा उसिनेको पानी खेर नफाल्नुहोस्, यस्ता छन् अचम्मका फाइदा पत्याउनै गाह्रो
एजेन्सी-अण्डा हाम्रो स्वास्थका लागी आबश्यक खाने कुरा हो ।प्रोटिनले भरिपूर्ण अन्डा स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।त्यस्तै अचम्म के छ भने अण्डा उसिनेको पानी बोट बिरुवाको लागी पनि उत्तिकै राम्रो हुन्छ ।अण्डा उसिनेपछि रहेको पानी फाल्ने गर्छौ । तर, तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, अण्डा उसिनेपछि …
बिरेनुन ग्यास्ट्रिकको लागि अचुक औषधि: सधै सेवन गर्नले हुन्छ यी रोगहरुबाट टाढा !
October 8, 2019	Health Comments Off on बिरेनुन ग्यास्ट्रिकको लागि अचुक औषधि: सधै सेवन गर्नले हुन्छ यी रोगहरुबाट टाढा !
तपाईंले बिरेनुनका बारेमा पक्कै सुन्नु भएको होला । यो नुन विभिन्न खालको रोगमा घरेलु उपचारको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आयुर्वेदमा त यसको धेरै औषधिहरुमा प्रयोग हुन्छ । सेतो नुनको सट्टा थोरै मात्रामा बिरेनुनको प्रयोग गर्न सकियो भने यसले फाइदा पुग्छ ।बिरेनुन प्राकृतिक नुन हो । यो हिमाली र पहाडी …
फर्सीको मुन्टो खाने गर्नु भएको छ भने हेर्नुहोस् यस्तो हुन सक्छ ! पढेर शेयर गरौ !
October 8, 2019	Health Comments Off on फर्सीको मुन्टो खाने गर्नु भएको छ भने हेर्नुहोस् यस्तो हुन सक्छ ! पढेर शेयर गरौ !
हुन त बजारमा वा तपाईँको करेसावारीमा विभिन्न प्रजातीका सागहरु सजिलै पाउन सकिन्छ । तर, तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातीमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टो वा भनौ फर्सीको पातको साग । उसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै नै लाभकारी हो ।तर, फर्सीको पात वा मुन्टो खानाले हामी विभिन्न रोगबाट …
October 8, 2019	Health Comments Off on खुर्सानीले रोक्न सक्छ फोक्सोको क्यान्सर,आफू पनि जानाै र शे-यर गरि अरुलाई नि जानकारी पुर्‍याऊ
ज्यादा अमिलो, पिरो, चिल्लो खाना स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुदैन तर नियमित केही मात्रामा खुर्सानी सेवनका भने अनेक फाइदा गर्ने गर्छ ।खुर्सानीले खानाको स्वाद मात्र बढाउँदैन, शरीरको वजन घटाउनेदेखि मुटुमम्बन्धी रोग र पिनासमा यो लाभदायक रहेकाे छ ।हरियो खुर्सानीले पुरुषमा प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा घटाउने गर्दछ । खुर्सानीमा एन्टी–अक्सिडेन्ट भरपूर पाइन्छ, जुन …
दाद, डण्डीफोर,मुख गन्हाउने ज्वरो रुघा खोकि को एउटै अचुक उपाय
October 8, 2019	Health Comments Off on दाद, डण्डीफोर,मुख गन्हाउने ज्वरो रुघा खोकि को एउटै अचुक उपाय
सामान्यतया अचार खान बाहेक यसको अरु कुनै उपयोग हामी त्यति गर्दैनौं । तर पुदिनाको प्रयोगले मानव स्वास्थमा धेरै भन्दा धेरै फाइदा गर्दछ । (पतेना) पुदिनाको प्रयोगबाट हुने कही फाइदाहरुः मुहारमा आउने डण्डिफोर र खिलबाट छुटकाराः पुदिनाको पातहरु सँगै ३ थोपा जती कागतीको रस मिलाएर मुहारमा लगाउने र पाँच मिनेट पछि …
October 8, 2019	Health Comments Off on घरमा उम्रने यो झार नफ्याँक्नुस्, यसमा हुन्छन् अनेकौं गुण
यो पृथिवीमा कुनै पनि चीज व्यर्थ छैनन्। हामीलाई झारपातहरूको महत्त्व नै थाहा छैन।जस्तै, हाम्रो घरमा अनि पर्खालमा भेटिने झारपात पर्सलेन पनि धेरै गुण भएको बिरुवा हो। हामी यसलाई जंगली बुट्यान ठानेर लुछेर मिल्काउँछौं । तर यसमा पोषण तत्त्वहरू भरपूर मात्रामा भेटिन्छन्।यो बिरुवाको स्वाद पनि गजबको हुन्छ र यसको पोषण पनि …